Joshụa 10 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ndị Izrel gara nyere ndị Gibiọn aka n’agha (1-7)
Jehova lụụrụ ndị Izrel agha (8-15)
Akụ́ mmiri ígwé dagburu ndị iro ndị Izrel nọ na-agba ọsọ (11)
Anyanwụ kwụụrụ otu ebe (12-14)
E gburu ndị eze ise bịara ịlụso ndị Gibiọn agha (16-28)
E weghaara obodo ndị dị n’ebe ndịda (29-43)
10 Ozugbo Adonaị-zidek bụ́ eze Jeruselem nụrụ na Joshụa ewegharala E-aị ma bibie ya, mee ya na eze ya+ ihe o mere Jeriko na eze ya,+ nụkwa na ndị Gibiọn agakwurula ndị Izrel ha emee udo,+ ha na ha ebirikwa, 2 ezigbo ụjọ jidere ya,+ n’ihi na Gibiọn bụ nnukwu obodo, nke dị ka otu n’ime obodo ndị eze na-achị. Ọ ka E-aị ukwuu.+ Ụmụ nwoke ya niile bụkwa ndị agha. 3 N’ihi ya, Adonaị-zidek bụ́ eze Jeruselem zigaara Hoham eze Hebrọn,+ Paịram eze Jamọt, Jefaya eze Lekish, na Diba eze Eglọn+ ozi, sị: 4 “Bịanụ nyere m aka ka anyị bibie ndị Gibiọn, n’ihi na ha agakwurula Joshụa na ndị Izrel, ha na ha emee udo.”+ 5 Ndị eze ise ndị Amọraịt+ wee zukọta, ha na ndị agha ha, gawa Gibiọn maa ụlọikwuu ha ga-anọ lụso ha agha. Ndị eze ndị ahụ bụ eze Jeruselem, eze Hebrọn, eze Jamọt, eze Lekish, na eze Eglọn. 6 Ndị Gibiọn wee zigara Joshụa ozi na Gilgal ebe ha mara ụlọikwuu ha,+ sị: “Ahapụla* ndị ohu gị.+ Bịa ngwa ngwa nyere anyị aka ma zọpụta anyị. Ndị eze Amọraịt niile, ndị bi n’ebe bụ́ ugwu ugwu, ezukọtala ịlụso anyị agha.” 7 Joshụa na ndị agha ya niile, ma ndị nke bụ́ aka ochie n’ịlụ agha,+ wee si Gilgal gawa. 8 Jehova wee sị Joshụa: “Atụla ha egwu,+ n’ihi na enyefeela m ha n’aka gị.+ O nweghị onye n’ime ha ga-alụsoli gị agha.”+ 9 N’abalị ahụ niile, Joshụa na ndị agha ya ji ụkwụ si Gilgal bịakwute ndị iro ha na mberede ma bido ịlụso ha agha. 10 Jehova wee tinye ha n’ọgba aghara,+ ndị Izrel ebido ịsụ ha akwụ na Gibiọn. Ha si n’ụzọ e si aga Bet-horọn chụrụ ha gawa, gburukwa ha ruo Azika na Makida. 11 Ka ha nọ na-agbara ndị Izrel ọsọ, si n’ugwu Bet-horọn na-agbadata, Jehova mere ka nnukwu akụ́ mmiri ígwé si n’eluigwe na-adagbu ha ruo Azika. Ndị akụ́ mmiri ígwé a gburu karịdịrị ndị nke ndị Izrel ji mma agha gbuo. 12 Ọ bụ n’ụbọchị a Jehova sụrụ ndị Amọraịt akwụ n’ihu ndị Izrel ka Joshụa gwara Jehova n’ihu ndị Izrel, sị: “Anyanwụ, kwụrụ otu ebe+ na Gibiọn.+ Ọnwa, kwụrụkwa otu ebe na ndagwurugwu Aịjalọn.” 13 Anyanwụ wee kwụrụ otu ebe, ọnwa akwụrụkwa otu ebe, ruo mgbe ndị Izrel merichara ndị iro ha. Ọ̀ bụ na e deghị ihe a n’akwụkwọ Jesha?+ Anyanwụ kwụụrụ otu ebe n’etiti eluigwe. Ọ daghịkwa ruo ihe dị ka otu ụbọchị zuru ezu. 14 Ọ dịghị ụbọchị ọ bụla ọzọ Jehova mere ihe dị otú ahụ mmadụ rịọrọ ya,+ ma tupu ụbọchị ahụ ma mgbe ọ gachara. Jehova mere ihe a n’ihi na ọ na-alụrụ ndị Izrel agha.+ 15 Mgbe e mechara, Joshụa na ndị Izrel niile laghachiri ebe ha mara ụlọikwuu na Gilgal.+ 16 Ma, ndị eze ise ahụ gbaara ọsọ gaa zoo n’ọgba dị na Makida.+ 17 E wee kọọrọ Joshụa, sị: “A hụla ndị eze ise ahụ ebe ha zoro n’ọgba dị na Makida.”+ 18 Joshụa wee sị: “Kwaranụ nnukwu nkume kwachie ọnụ ọgba ahụ, họtakwanụ ụmụ nwoke ndị ga na-eche ebe ha nọ nche. 19 Ka ndị nke ọzọ n’ime unu ghara ịkwụsị ịchụ ndị iro unu. Chụwanụ ha, sikwanụ n’azụ gbuo ha.+ Unu ekwela ka ha banye n’obodo ha, n’ihi na Jehova bụ́ Chineke unu enyefeela ha n’aka unu.” 20 Mgbe Joshụa na ndị Izrel sụchara ndị iro ha akwụ, bibiekwa ha, ya afọdụ ndị gbaara ọsọ gbaba n’obodo ndị a rụsiri ike, 21 ndị agha Izrel niile laghachiri Makida ebe ha mara ụlọikwuu ha, ebe Joshụa nọ, n’enweghị ihe mere ha. O nweghịzi onye nwara anwa kwuo okwu ọjọọ ọ bụla gbasara ndị Izrel. 22 Joshụa wee sị: “Megheenụ ọnụ ọgba ahụ ma si na ya kpọpụtara m ndị eze ise ahụ.” 23 Ha wee si n’ọgba ahụ kpọpụtara ya ndị eze ise ahụ, ya bụ, eze Jeruselem, eze Hebrọn, eze Jamọt, eze Lekish, na eze Eglọn.+ 24 Mgbe ha kpọtaara Joshụa ndị eze ahụ, ọ kpọkọtara ụmụ nwoke niile n’Izrel ma gwa ndị ọchịagha ndị agha so ya gaa agha, sị: “Bịanụ nso. Zọkwasịnụ ụkwụ n’azụ olu ndị eze a.” Ha wee bịa nso ma zọkwasị ụkwụ n’azụ olu ha.+ 25 Joshụa wee sị ha: “Unu atụla egwu, unu atụkwala ụjọ.+ Nweenụ obi ike, dịkwanụ ike, n’ihi na ọ bụ otú a ka Jehova ga-eme ndị iro unu niile, ndị unu ga-alụso agha.”+ 26 Joshụa mechara gbuo ndị eze ahụ, kwụwakwa ha n’elu osisi ise. Ha kwụgidere n’elu osisi ndị ahụ ruo mgbede. 27 Mgbe anyanwụ dara, Joshụa kwuru ka e butuo ha n’osisi ndị ahụ+ ma tụba ha n’ọgba ahụ ha zoro. Mgbe a tụbara ha ebe ahụ, e buuru nnukwu nkume kwachie ọnụ ọgba ahụ ruo taa. 28 Joshụa weghakwaara Makida+ n’ụbọchị ahụ ma jiri mma agha gbuo ndị bi na ya. O gbukwara eze ya nakwa onye ọ bụla* nọ na ya. O nweghịkwa onye ọ hapụrụ ndụ.+ O mere eze Makida+ ihe o mere eze Jeriko. 29 Joshụa na ndị Izrel niile wee si Makida gaa Libna ma lụso ndị Libna agha.+ 30 Jehova nyefekwara Libna na eze ya+ n’aka ndị Izrel, ha ejiri mma agha bibie ya, gbuokwa onye ọ bụla* nọ na ya. O nweghị onye ha hapụrụ ndụ n’obodo ahụ. Ha mekwara eze ya ihe ha mere eze Jeriko.+ 31 Joshụa na ndị Izrel niile sikwa na Libna gaa Lekish,+ maa ụlọikwuu ebe ahụ, lụsokwa ha agha. 32 Jehova nyefekwara Lekish n’aka ndị Izrel, ha eweghara ya n’ụbọchị nke abụọ. Ha jikwa mma agha bibie obodo ahụ na onye ọ bụla* nọ n’ime ya,+ otú ha mere Libna. 33 Ma Horam eze Giza+ gara ka o nyere Lekish aka, Joshụa egbuo ya na ndị ya. O nweghịkwa onye ọ hapụrụ ndụ n’obodo ahụ. 34 Joshụa na ndị Izrel niile sikwa Lekish gaa Eglọn,+ maa ụlọikwuu ebe ahụ ma lụso ha agha. 35 Ha weghakwaara ya n’ụbọchị ahụ, jiri mma agha bibie ya. Ha gburu onye ọ bụla* nọ n’ime ya n’ụbọchị ahụ, otú ha mere Lekish.+ 36 Joshụa na ndị Izrel niile sikwa Eglọn gaa Hebrọn,+ lụsowekwa ha agha. 37 Ha weghaara ya ma jiri mma agha bibie ya na eze ya na obodo ya niile nakwa onye ọ bụla* nọ n’ime ya. O nweghị onye ọ hapụrụ ndụ. O bibiri obodo ahụ na onye ọ bụla* nọ n’ime ya, otú ahụ o mere Eglọn. 38 N’ikpeazụ, Joshụa na ndị Izrel niile gakwara Diba+ ma lụso ha agha. 39 O weghaara ma ya ma eze ya ma obodo ya niile. Ha jikwa mma agha bibie ha, bibiekwa onye ọ bụla* nọ n’ime ya.+ O nweghị onye ha hapụrụ ndụ.+ O mere Diba na eze ya ihe o mere Hebrọn, otú o mekwara Libna na eze ya. 40 Joshụa bibiri obodo niile bụ́ ugwu ugwu, bibiekwa Negeb,* Shefila,*+ na ebe ndị dị ná mkpọda, nakwa eze ha niile. O nweghị onye ọ hapụrụ ndụ. O bibiri ihe niile na-eku ume,+ otú Jehova bụ́ Chineke Izrel kwuru ka e mee.+ 41 Joshụa meriri ha, si na Kedesh-bania+ ruo Gaza+ nakwa ala Goshen niile+ ruokwa Gibiọn.+ 42 Joshụa meriri ndị eze a niile ma weghara ala ha otu mgbe, n’ihi na ọ bụ Jehova bụ́ Chineke Izrel na-alụrụ ndị Izrel agha.+ 43 Mgbe e mechara, Joshụa na ndị Izrel niile laghachiri ebe ha mara ụlọikwuu na Gilgal.+
^ Na Hibru, “Ewepụla aka gị n’ahụ́.”
^ Ma ọ bụ “ebe ugwu.”